तामाङ गाउँखाने कथा – एक अध्ययन – Dhadingnews.com – धादिङ जिल्लाको पहिलो डिजिटल पत्रिका
तामाङ गाउँखाने कथा – एक अध्ययन
प्रकाशित मिति: १ चैत्र २०७०, शनिबार १५:०२
जनजातिहरूको सम्पत्ती भनेको उसका चालचलन, रीतिरिवाज, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा आदि हुन् । लोक साहित्यमा यी सबको चर्चा हुने भएकोले तामाङ गाउँखाने कथामा पनि यसको चर्चा पाइन्छ । भाषा, कला, परम्परा र संस्कृति जोगाउन तामाङ गाउँखाने कथाले विशेष योगदान दिएको छ । तामाङ जातिले प्राचीन कालदेखि नै आफ्नो मौलिकताको चिनारी हरेक क्षेत्रमा दिदै आएको छ । कमजोर सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्थाले गर्दा समय अनुकुल परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा उनीहरूको कमजोरी भन्दा पनि सामाजिक संरचना र राजनैतिक व्यवस्थाको दोष देखिन्छ । यसको कारणले तामाङ गाउँखाने कथाहरू प्रकाशन तथा प्रसारणको माध्यममा पुग्न सकेका छैनन् ।
सिङ्गो तामाङ समुदायसँग तामाङ गाउँखाने कथाको सम्बन्ध अविछिन्न रहेको पाइन्छ । यो सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अवस्था विकाससँग जोडिएको छ । यसको विकाससँगै तामाङ लोक साहित्यको पनि विकास हुने भएकोले तामाङ पहिचान जोगाउन तामाङ गाउँखाने कथाको संरक्षण गरिनु आवश्यक छ । संरक्षण, सम्बर्धन रविकासको एक प्रयास स्वरुप यो अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।
गाउँखाने कथाको परिचय ः
प्रश्न र उत्तर शैलीमा बौद्धिकता परीक्षण गर्न सोधिने लोक साहित्यको एक विधालाई गाउँखाने कथा भनिन्छ । नेपालीमा अड्का हाल्नु, अड्का वा झ्याँगा थाप्नु, कथा हाल्नु, जान्ने कथा, कर्णाली अञ्चलमा साइतर वा सातर, पश्चिमी भेगतिर सास्तर, पुर्बी भेगतिर अड्को वा अत्तो, जुम्ला भेगमा कठ्यौरा हाल्नु भनिन्छ । अवधी भाषामा बुझौअल तथा हियाली भनिन्छ । यसलाई हिन्दीमा प्रहेलिका वा पहेली पनि भनिन्छ । गाउँखाने कथालाई संस्कृतमा ब्रम्होदय, अङ्ग्रेजीमा रिडल (Riddle), जर्मनीमा र्याक्टसेल (-Ractsel) र जापानी भाषामा नाजो नाजो भनेर चिनिन्छ ।
मनोरञ्जन र ज्ञानवद्र्धनका निम्ति उपयोगी ठानिने यो कथा प्रश्नकर्ता र उत्तरदाता दुई समूहका बिचमा सबाल जबाफका रूपमा प्रस्तुत हुने लोक आख्यानको लघुतम प्रविधा हो । यसमा प्राश्निकले सोधेको जबाफ दिन नसक्ने उत्तरदाताले गाउँ दिनुपर्दछ । उत्तरदाताले हारको प्रतीक गाउँ दिनु पर्ने र प्राश्निकले जितको प्रतीक गाउँ पाउने पद्धतिबाट गाउँखाने कथा रहन गयो भन्ने पुस्टि हुन जान्छ । यसमा प्रतीकात्मक अर्थ सङ्केत प्रत्येक प्रश्नको उत्तर भएर रहेको हुन्छ (सुवेदी र सुवेदी, २०५५ ः २) । नामकरण गाउँ दिने प्रचलनले भएकोमा प्रायः विद्वान्हरूको मत मिलेको छ । यस्ता कथाहरू अति संक्षिप्त र कूट प्रकृतिका हुन्छन् ।
गाउँखाने कथा भनेपछि एउटा जटिल कूट प्रश्न खडा हुन्छ । उत्तर दिन नसके गाउँ खाने प्रचलन भएकाले यस्ता कथालाई गाउँखाने कथा भनिन्छ (भट्टराई, २०५६ ः २७) । यसमा गाउँघरे मानिसको हृदयको उद्गारमा तिखारिएको बुद्धिको देन पनि देखा पर्दछ, जुन मामुली भए पनि अर्थपूर्ण हुन्छ र समस्या पूर्तिको रूपमा प्रश्न बनेर सबका सामुन्ने खडा हुन्छ । यसैले गाउँखाने कथाहरू बुद्घि विनोदका साधन पनि हुन पुगेका छन् ।
लोक जीवन सुखदुःखका अनेक क्षणमा आफ्ना जिज्ञासा तथा मनोरञ्जनका निम्ति विभिन्न साधनको उपयोग गर्दछ । गाउँखाने कथा तिनै मध्येको एउटा रोचक विषय हो । मानिसहरू दैनिक काम सकेर फुर्सतको बेला बसिबियाँलो गर्दा यस्ता रमाइला प्रसङ्ग उठाउँछन् । दुई चार जना एकै ठाउँ भेला भएर हँस्सी रमाइलोका रूपमा कुरैकुराले अड्का थाप्ने र फुकाउने चलन मानव समाजकै आदिम स्वभाव हो । यो परम्परा नेपाली लोक जीवनमा गाउँखाने कथाका रूपमा जीवित छ । दैनिक व्यवहार तथा बसाउठीमा मानिस बुद्धि परीक्षाका निम्ति आफ्नो कथन घुमाई फिराई अरूले हम्मेसि ठम्याउन नसक्ने पार्न चाहन्छ । त्यस बेला ऊ अरूले सहजै बुझ्न नसक्ने भाषा भङ्गीमाको प्रयोग गर्न थाल्छ र वातावरणलाई रोचक तुल्याउँछ । वस्तुतः यही कथनले गाउँखाने कथाको रूप धारण गर्दछ (पराजुली, २०६५ ः १७४) ।
तामाङ गाउँखाने कथाको परिचय ः
गाउँखाने कथा सबै जाति र देशमा प्रचलित लोक साहित्यको एक विधा हुनाले तामाङ जातिमा पनि प्रचलनमा रहेको हो । तामाङ जातिले गाउँखाने कथालाई ओमख्लाङ, जोमख्लाङ, कोच्चाख्लाङ, अर्थ कथा, दोन तथा जान्ने कथा आदि भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ ।
पशु पालनमा सक्रिय यस जातिले घुम्ती गोठ गाउँदेखि टाढाटाढा लाग्दा सबै एकत्रित भएर मनोविनोदको रूपमा पालैपालो प्रश्न सोधेर गोठमा खेलको रूपमा खेलिने गर्दछ । तामाङहरू आर्थिक उपार्जनको लागि घर गाउँदेखि टाढा सामूहिक रूपमा छोङमा जाने गर्दछन् । त्यसरी जाँदा बेलुकी खाना खाई सुत्ने बेलामा मनोविनोद तथा चिन्ता हरणको लागि गाउँखाने कथाहरू खेल्ने गर्दछन् । दिनभरको चर्को परिश्रमपछि लोक जीवन साँझपख वा बेलुकी भोजन गरेर यिनै गाउँखाने कथाका माध्यमले आफ्नो थकान हटाउँछन् (पराजुली, २०६५ ः १७९) ।
तामाङ गाउँखाने कथामा सबाल जबाफ उठ्दा प्रश्नको सही उत्तर फुकाउन नसकेमा ओम दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई ओमख्लाङ भनेको हो । धेरै ओम पाएमा आफ्नो आयु बढ्छ भन्ने मान्यताले गर्दा जटिल र नयाँ गाउँखाने कथाको निर्माण गरिएको पाइन्छ । पछि अन्य जातिको प्रभावले गर्दा उत्तर नमिले गाउँ दिने चलन चल्यो । यसलाई तामाङमा रूपान्तरण गर्दा जोमोख्लाङ हुन गएको हो ।
त्यस्तै गरी उच्च तह व्यक्तिहरू जस्तै ; मुखिया, लामा, बोम्पो, सङतुङहरूमा को जान्ने भनी बाजी हालेर बौद्धिकता र चलाखीपनको जाँच लिने गर्दछ । यसप्रकारको तामाङ गाउँखाने कथालाई दोन भनिन्छ । दोन भनेको साँच्चै बाजी थाप्ने गर्दछ (बुद्घि बहादुर तामाङका अनुसार) ।
गाउँखाने कथाको तामाङ समुदायमा धेरै राम्रो प्रभाव छ । यो समाज, वातावरण, परिस्थिति, राजनीतिका साथै अन्य विविध विषयवस्तुमा समेत रचना गरिएको पाइन्छ । तामाङ गाउँखाने कथाहरू तामाङ वाङ्मयका अमूल्य निधि हुन् र लोक साहित्यका राम्रा नमुना हुन् । तामाङ समाजका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित गाउँखाने कथाहरू प्रचलनमा पाइन्छन् ।
तामाङ गाउँखाने कथाको संरचना
कुनै अल्झो वा समस्याबारे प्रश्न गरी उत्तर वा समाधान मागी मौखिक रूपमा प्रश्न उत्तर गरिने संरचनालाई गाउँखाने कथा भनिन्छ । यसमा वस्तु सादृश्यबाट जबाफ खोज्नु पर्दछ । तामाङ गाउँखाने कथा सामूहिक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । कथा हाल्ने र कथा फुकाउने दुबै थरी आमुन्ने सामुन्ने हुनुपर्छ । प्रतीकात्मक अड्काहरू बौद्धिक विकास र मनोरञ्जनका निम्ति बढी उपयोगी हुन्छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाको प्रयोजन श्रोतालाई अर्थमा अलमल्याउनु हो । यसमा कुनै वर्णन प्रस्तुत गरी त्यसको अर्थ के हो भन्ने उत्तर मागिन्छ । तामाङ गाउँखाने कथामा सुरुमा प्रश्न सोध्ने र लगत्तै फुकाउने गर्नु पर्दछ । उत्तर फुकाउन नसकिएमा प्रश्नकर्ताले तिन पटकसम्म उत्तरदातालाई सङ्केत गर्दछ । त्यसमा पनि सही उत्तर नआएमा ओम वा गाउँ मागिन्छ । जस्तै ;
प्रश्नकर्ता ः स्हुर सोम की योङ ता ?(तिन सुरे चिज के हो ?)
उत्तरदाता ः असे (थाहा छैन) ।
प्रश्नकर्ता ः चु य्हुल्सारी मुपा (यही संसारमा छ) ।
उत्तरदाता ः नफुम (अन्डा) ।
प्रश्नकर्ता ः अयिन, दोङ्पो जिता तब (हैन, सानो बोट हुन्छ) ।
प्रश्नकर्ता ः म्रङ्री जङ्प (बारीमा लगाइन्छ) ।
उत्तरदाता ः असे (थाहा भएन) ।
प्रश्नकर्ता ः अनम् ओम पिनो (त्यसो भए ओम देउ) ।
उत्तरदाता ः ओम ।
प्रश्नकर्ता ः या थोल ब्र्या (फापर) ।
प्रश्नात्मक संरचना यसमा रहेको हुन्छ । सरल प्रश्न तर उत्तर कठिन हुन्छ । सामान्य गाउँखाने कथा यसरी सबाल जबाफ गरिए तापनि दोन भने एकै पटक मात्र जटिल प्रश्न सोधिन्छ र जबाफको खोजी गरिन्छ । मुखिया, लामा, बोम्पो, लप्ता आपा, ताम्बा, सङतुङहरूमा को जान्ने भनी बाजी हालेर बौद्धिकता र चलाखीपनको जाँच लिने गरिन्छ । साँच्चै बाजी थापेर जित हार समेत हुने हुनाले यस प्रकारको गाउँखाने कथालाई दोन भनिएको हो । जस्तै;
ठुङ्ला कोइपा दो छाचो न्हङ्री, दिङ्ला कोइपा रेप्क्या लिम्बु दिङ्प, स्हला कोइपा वन न्हङकई चे री ठुङ्पे, याकल स्हला कोइपे बिसिरी नक्पो चि यिन्प ? (पहरामा जन्मने, जहाँसुकै घुम्ने, खाना याकल खाने जिङ्रिङे चिज के हो ?)
ठुङ्पा कोइपा दो छाचो न्हङ्री ठुङ्पा, दिङ्पा कोइपा रेप्क्या लिम्बु दिङ्प, स्हपा कोइपा वन न्हङकई चे री ठुङ्पे, याकल स्हला कोइपे बिसिरी नक्पो दुम्सिङ यिन्प । (पहरामा जन्मेको, जहाँसुकै घुम्ने, खाना याकल खाने, जिङ्रिङे चिज दुम्सी हो ।)
यसरी कवितात्मक प्रश्न र कवितात्मक उत्तर दिने संरचना पनि तामाङ गाउँखाने कथामा पाइन्छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाका विशेषताहरू
प्रश्न र उत्तर शैलीमा हँुदैमा सबै सबाल जबाफहरू गाउँखाने कथा हुँदैनन् । गाउँखाने कथामा निश्चित विशेषताहरू हुनु पर्दछ । गाउँखाने कथा ग्रामीण जन जीवनका सोचाइ र बुद्धि विनोदका परिणाम हुन् । यी बढी प्राकृतिक र यथार्थपरक हुन्छन् (भट्ट, इ. २००० ः १२) । मनोरञ्जन, खिरिलोपन, बौद्धिकता र प्रतीकात्मकता गाउँखाने कथाले आफ्ना विशेषताका रूपमा बोकेको हुन्छ । तामाङ गाउँखाने कथाहरू पनि सोद्देश्य पूर्तिका निम्ति प्रयोग हुन्छन् ।
सूक्ष्म निरीक्षणात्मक, कूटिल अभिव्यक्ति, बौद्धिक चातुर्य, कलात्मकताको सम्मिश्रण, व्यवहारिक र जीवनगत वस्तुको प्रतीकात्मक प्रयोग, ग्रामीण वस्तुस्थितिको प्रस्तुति, कूटिल भनाइको विशेषता निर्धारण गरिएको भए पनि विभिन्न विद्वानहरूको विचार समेतको आधारमा गाउँखाने कथाको निम्नानुसारका विशेषताहरू तय गर्न सकिन्छ । तामाङ गाउँखाने कथा पनि नेपाली गाउँखाने कथाकै समरूप रहेकाले उस्तै प्रकारका विशेषताहरू पाइन्छन् । यहाँ सर्वकालिकता, दार्शनिकता तथा गहन शैली, सरलता र स्थानीयता तथा बौद्घिकता परीक्षण तामाङ गाउँखाने कथाको विशेषताको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाहरू खास समय, अवस्था, परिवेश, चाड पर्व वा औपचारिकताको सीमामा बाँधिएका हँुदैनन् । जहिल्यै जहाँ पनि समेटिन सक्छन् । यसैले पनि बाल बालिका, युवा युवती तथा बुढा बुढीसम्मले यिनका विषयमा चासो लिने गर्दछन् । यिनमा समेटिएका विषयवस्तुहरू पहिलेदेखि पछिसम्म उस्तै महत्त्व राख्ने हुन्छन् । सधै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनु यिनको विशेष्।ता हो ।
दार्शनिकता तथा गहन शैली
तामाङ गाउँखाने कथाहरू फगत मनोरञ्जनको लागि मात्र प्रयोग गरिँदैन । यसमा इतिहास, वंशावली र रीतिरिवाजको बारेमा गूढ र कूट शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ । बुद्धि विनोदका पर्याय समेत रहेकोले यसमा दार्शनिकताको मात्रा अधिक रहेको हुन्छ । थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई दर्शनको आधारमा प्रश्नहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाहरूमा गहन रूपमा सोच्नु पर्ने प्रश्नहरू प्रयोगमा आउँदछन् । सरल प्रश्नहरू नै जटिल किसिमले सोच्नु पर्ने गरी सोधिन्छ, जसले गर्दा यो गहन हुन्छ । गहनता नै यसको मुख्य विशेषता हो
सरलता र स्थानीयता
तामाङ गाउँखाने कथाहरू स्थानीय जन जीवनको यथार्थ चित्रण र बुद्धि विनोद गर्न प्रश्नहरू निर्माण गरिने हुनाले यसमा स्थानीयताको आस्वादन गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि यो सरल हुन्छ । वरपर रहेका स्थानीय वस्तु, घटना, मान्यता, चालचलन, प्रचलन र प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रश्नहरू निर्माण गरी उत्तरको खोजी गरिन्छ जसले स्थानीयताको प्रवद्र्धन हुन पुग्दछ । सरलता र स्थानीयता तामाङ गाउँखाने कथाको अर्को विशेषता हो ।
गाउँखाने कथाको प्रमुख उद्देश्य नै बौद्धिकताको परीक्षण हो । यसमा चातुर्यतापूर्ण, बौद्धिक र गूढ प्रश्नहरू समावेश गरिन्छन् । बाजी जित्ने, धेरै ओम वा गाउँ पाउने उद्देश्यले सबाल सोधिने हुनाले पनि यो बढी बौद्धिक हुन पुग्दछ ।
तामाङ गाउँखाने कथाको महत्त्व
गाउँखाने कथामा स्थानीय, जातीय, सामाजिक र आर्थिक लगायत ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई समेत रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ । अति संक्षिप्त हुने हुनाले बुद्धि तिखार्न र स्मरण शक्ति बढाउन समेत यसले भूमिका निर्वाह गर्दछ । केटा केटीहरू समेत यस्ता कथा भन्न र फुकाउन उत्सुक हुन्छन् । यिनमा भाषा तथा लोक साहित्यको जगेर्नासँगै मनोविनोद र बौद्धिकता समेत प्रदर्शन हुन्छन् । कूट पद्य र अड्काको रूपमा विकसित भए तापनि गाउँखाने कथा ग्रामीण जन जीवन, स्थानीय परिवेश, वातावरण, परिस्थिति र बुद्धि विनोदको परिणाम भएकाले यसको महत्त्व धेरै रहेको पाइन्छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाले तामाङ जातिको सामाजिकता समेटेको हुन्छ । त्यसैले तामाङ गाउँखाने कथाहरू भन्नु नै समाजको प्रतिबिम्ब हो । तामाङ गाउँखाने कथाहरू जातीय सामाजिकता समेटेको हुन्छ । तामाङहरूको जातीय, लैङ्गिक, पारिवारिक, धार्मिक र सांस्कृतिक अवस्था समेत यसमा समेटिने हुनाले यसको सामाजिक महत्त्व रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
तामाङ गाउँखाने कथाहरूमा यस जातिमा विद्यमान रीतिरिवाज, समस्या, धार्मिक निष्ठा र अन्य विविध जातीय सबालहरूमा सबाल जबाफ समेत हुने हुनाले यसको महत्त्व रहेको छ । गाउँखाने कथाका माध्यमबाट आफ्नो जातिप्रतिको चिनारी, पहिचान, वेशभूषा, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज र परम्पराको समेत जानकारी हुन्छ । वास्तवमा तामाङ गाउँखाने कथाले तामाङ जातिको न्वारनदेखि मृत्युसम्मका जातीय सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ
साहित्यिक र सृजनात्मक महत्त्व
मौखिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको तामाङ गाउँखाने कथाहरूले नेपाली लोक साहित्यलाई समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेका छन् । सरल र मिठासपूर्ण प्रश्नमा बौद्धिक एवम् कुटिल जबाफ खोजिने हुनाले झन् यो बालकदेखि बृद्धसम्मलाई लोकप्रिय रहेको छ । गाउँखाने कथाको प्रयोगद्वारा आफू जुन परिस्थितिमा छ त्यही परिस्थितिसँग मिल्ने गरी प्रश्नहरू निर्माण गर्ने तथा फुकाउने सिर्जनशील क्षमताको समेत विकास हुन्छ ।
३.५.४ ऐतिहासिक महत्त्व
प्राचीन कालमा कुनै गोप्य कुरा भन्नु परेमा प्रयोग गरिएको शैली नै गाउँखाने कथा बन्यो भन्ने विद्वान्हरूको मान्यता रहेको पाइन्छ । तामाङहरूको विगतको घटना क्रम, चेतना स्तरको मूल्याङ्कन समेत गरिने हुनाले तामाङ गाउँखाने कथाको ऐतिहासिक महत्त्व छ । इतिहासको कालखण्डमा गरेका सङ्घर्ष, पीडा र दुःखको प्रतिनिधित्व स्वरूप सबाल जबाफ हुने गर्दछ । तामाङ जाति हस्त निर्मित वस्तुहरूको प्रयोग गर्दथे भन्ने सुन्दर उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
तामाङहरू ऐतिहासिक कालखण्डदेखि प्रताडित थिए । उनीहरू जमिनको माथिल्लो भाग पहाडको टाकुरा आसपास खोरिया फारेर बस्दथे । ती स्थानमा काठ प्रसस्त पाइने हुनाले तिनीहरूको अधिक प्रयोग गर्दथे । साहुँ महाजनको काममा जाँदा भेटाइने लाम्चो ढुङ्गा ल्याई काठमा खोपेर नुन पिध्ने गर्दथे । त्यही ऐतिहासिकता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रकारका थुप्रै गाउँखाने कथाहरू तामाङ समाजमा प्रचलनमा रहेको छ । त्यसैले तामाङ गाउँखाने कथाको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ ।
स्थानीयताको चित्रण तामाङ गाउँखाने कथाहरूमा पाइने हुनाले यसको भौगोलिक महत्त्व रहेको छ । तामाङ समुदाय कस्ता स्थानमा बसोबास गरेका छन् भन्ने कुरा गाउँखाने कथामा गरिने सबाल जबाफमा आकलन गर्न सकिन्छ । आफू बसोबास गर्ने स्थानहरूको चिनारी दिन गाउँखाने कथाहरू सफल छन् । उनीहरू प्रश्न वा उत्तर स्थानीय भौगोलिक परिवेशमा आधारित रहेर रचना गर्ने गर्छन् ।
तामाङ गाउँखाने कथाले यस जातिका धार्मिक आस्था र विश्वास पनि दर्साउँदछ । तामाङहरूका सनातन धर्म, आस्था र विश्वासको बारेमा तामाङ गाउँखाने कथाहरूबाट थाहा पाउँदछौं । त्यसैले तामाङ गाउँखाने कथाले धार्मिक महत्त्व पनि बोकेको छ । लामाले लगाउने गरेको मालालाई तामाङ गाउँखाने कथामा यसरी प्रस्तुत भएको छ । ग्यरस गी ल ग्रुङ गीएनो ता ? फ्रेङपा (एक सय आठकै एउटै आन्द्रा के हो ? फ्रेङपा लामाले लगाउने माला) ।
तामाङ गाउँखाने कथाहरू अति संक्षिप्त प्रकार, प्रश्नात्मक अभिव्यक्ति, चतुर्याइपूर्ण, बौद्धिक र गुढ, बुद्धि र योग्यताको परीक्षण, मनो विनोदको माध्यम, प्राचीन र सार्वभौमिक रूप, गुढ र कुट शैलीको प्रयोग, भाषा संक्षिप्त, कसिलो, अनेकार्थी र अल्मलाउने खालको, गद्यात्मक र पद्यात्मक दुबै प्रकारका भाषामा हुने हुँदा वाल वालिकादेखि बृद्ध बृद्धासम्मले रूचाउँछन् । सामाजिक, आर्थिक, जातीय, साहित्यिक र सृजनात्मक, ऐतिहासिक र भौगोलिक महत्त्व रहेको छ । तामाङहरूको ऐतिहासिक पहिचानको खोजीमा तामाङ गाउँखाने कथाहरूले सहयोग पुग्दछन् । तामाङ गाउँखाने कथालाई विषय वस्तु, माध्यम र संरचनाको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, स्थानीय र विविध कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ ।
गाँउघर, गोठ, पधँेरो तथा चौतारीमा मात्र स्थान पाएको तामाङ गाउँखाने कथाको थप खोजी तथा अध्ययन गरेर थप चर्चायोग्य बनाउनु पर्छ । विकास र प्रचार प्रसारमा उचित अवसर पाउने हो भने तामाङ समुदायको थप मूल्य र मान्यताहरू उत्घाटन हुनेछन् । जसले तामाङ साहित्य र समुदाय मात्र नभई नेपाली साहित्य र समुदायले लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
(लेखक गोपाल फ्युवा तामाङ विगत एक दसकदेखि ल्हाप्साङकर्पो क्षेत्रका तामाङ लोक साहित्यको खोज र अनुसन्धानरत अध्यता हुन् ।)
अन्तर्वार्ता (२०६९) ः बुद्घिबहादुर तामाङ, (दार्खा ब्युर्चेत निवासी ७५ वर्षियसँगको अन्तर्वार्ता )
तामाङ, गोपाल फ्युबा (२०७०) ः तामाङ गाउँखाने कथाहरूको सङ्कलन, वर्गीकरण र विश्लेषण, स्नातकोत्तर शोधपत्र अप्रकाशित
पराजुली, कृष्ण प्रसाद (२०६५), नेपाली उखान र गाउँखाने कथा, काठमाडौैं ः रत्न पुस्तक भण्डार ।
भट्ट, गोविन्द (इ. २०००), लोक साहित्यको अवलोकन, काठमाडौं ः एकता बुक्स ।
भट्टराई, घटराज (२०५६), नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक रुपरेखा, काठमाडौं ः सृष्टि प्रकाशन ।
सुवेदी, राजेन्द्र र होम सुवेदी (२०५५), नेपाली साहित्यको रुपरेखा, नेपाल ः पाठ्यसामाग्री प्रकाशन ।
१ चैत्र २०७०, शनिबार १५:०२ मा प्रकाशित